तपाईलाई भोट किन दिने?- भिडियो - कान्तिपुर समाचार
तपाईलाई भोट किन दिने?
काठमाडौं — हामीले जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिकाका लागि मेयरका उम्मेदवारहरुलाई तपाईलाई जनताले भोट किन दिने? भन्ने प्रश्न सोधेका थियौं । जवाफमा कांग्रेस, एमाले र माओवादीका मेयरका उम्मेदवारले आफ्नो विकास योजनाहरु अगाडी सारेका छन् ।
प्रकाशित : वैशाख २६, २०७४ १७:१०
निर्वाचन टोली मतदान केन्द्र तर्फ लाग्यो
वैशाख २६, २०७४ भीमबहादुर सिंह
जाजरकोट — पहिलो चरण अन्तर्गत बैशाख ३१ गते हुने निर्वाचनका लागि कर्मचारी तथा सुरक्षाकर्मीको टोली मतदान स्थल तर्फ हिंडेको छ । कर्मचारीको टोली मतपत्र, मतपेटीका, मतदाता परिचय पत्र लगाएत निर्वाचन सामाग्री सहित दुर्गम गाउँस्थित केन्द्र तर्फ लागेको हो ।
पहिलो चरण अन्तर्गत बैशाख ३१ गते हुने निर्वाचनका लागि कर्मचारी तथा सुरक्षाकर्मीको टोली मतदान स्थल तर्फ हिंडेको छ ।
कर्मचारीको टोली मतपत्र, मतपेटीका, मतदाता परिचय पत्र लगाएत निर्वाचन सामाग्री सहित दुर्गम गाउँस्थित केन्द्र तर्फ लागेको हो । सदरमुकामदेखि टाढा रहेका जुनीचाँदे गाउँपालिका, बारेकोट गाउँपालिका र त्रिवेणी नलगाड नगरपालिकाको रग्दा, भगवती लगाएत स्थानमा रहेका मतदान केन्द्रका लागि टोली सोमबार नै त्यस तर्फ लागेको मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयका नायव सुब्बा सर्वराज खत्रीले बताए ।
यस्तै, कुशे गाउँपालिका, शिवालय गाउँपालिका र छेडागार नगरपालिकाका लागि खटीएको टोली मंगलबार मतदान केन्द्र तर्फ लागेको खत्रीले बताए ।
दुर्गम क्षेत्र जिल्ला मतदान केन्द्र, सदरमुकामको भेरी नगरपालिका अन्तर्गतका मतदान केन्द्र लगाएत सबै केन्द्रमा बुधबारसम्म निर्वाचन टोली पुग्ने व्यवस्था मिलाइएको उनले बताए । कार्यालयले यहाँका १ सय १३ मतदान केन्द्रका लागि ६ सय कर्मचारी र म्यादीसहित १ हजार सुरक्षाकर्मी खटाएको छ । कार्यालयले निजामती कर्मचारी, शिक्षक, संस्थानका कर्मचारी लगाएतलाई निर्वाचनमा खटाएको उनले बताए ।